Taattoo Masaka - Deetaa walfaannee
Fuula Taattoo Masaka kana irratti hammangaa maddaa kan walfaannee deetaa hundaa addaan basuun, moggaasolee isaanii qabatee jijjiiruu ni dandeesa. dabalatan akaakuuwwan hammamgaa jijjiiruun ni danda`ama. Dura fuula Data Range irraa hammangaa deetaa filuunii fi deetaa walfaannee hin barbaachifne haquun ykn man`ee biraa irraa walfaannee deetaa dabaluun ni danda`ama.
Fuula kana irratti yoo filannooleen hedduun akka argaman barbaadame, hammangaa deetaa fuula Chart Wizard - Data Range fi fuula kana kan dhosku ibsi.
Qaaqan kun taattoolee gabatee calc ykn Writer irratti hundaa`anniif qofa argama.
Walfaannee deetaa qindeessuu
Taattoo ammee keessaa deetaa walfaannee hunda kan sanduuqa tarree Data Series keessaa ilaali.
Deetaa walfaannee qindeessuuf, tarree keessaa galfata fili.
Galfata filamee gaditti deetaa walfaannee biroo dabaluuf Dabali cuuqaasi.
Tarree Data Series irraa galfata filame haquuf Haqi cuuqaasi.
Galfata filame tarree gadii fi olii keessaa siiqsuuf qabduulee xiyyaa UP fi Down gargaarami. Kun tartiiba gabatee madda deetaa keessaa hin jijjiiru, garuu taattoo keessaa qindaa'ina qofa jijjiira.
Gulaalaa walfaannee deetaa
Galfataaf amaloota tarree keessaa ilaaluu fi gulaalaaf galfata cuuqaasi.
sanduuqa tarree Data Ranges keessaa maqaalee fakkeenyaa fi ma`ee hammangaalee kutaalee walfaannee deetaa ilaali.
Galfata cuuqaasi, itti aansuun qabeentoota sanduuqa barruu gadii gulaali.
moggaasni sanduuqa barruutti aanu fakkeenya ammeen filame ibsa.
qaaqa gadeessuu fi hangii hantuutee waliin filuuf hammangaa saagi ykn hammanga deetaa fili cuuqaasi.
Yoo hammanga deetaa bal`insoota man`ee hedduu tokko tokkoo isaaniitti kan hin aanne barbaade, hangii jalqabaa saagi, achii dhuma sanduuqa barruu irratti hujeekan tuq lameedabali, itti aansuudhaan hammangalee biraa saagi. Akka daanggessaatti gidduu hammangaleetti tuq lamee gargaarami.
Hangii fakkeenya deetaaf, kan akka gatiiwwan-Y, dirqama man`ee maggaasa of keessatti hin qabatu.
Gulaalaa akaakuuwwanii ykn moggaasa deetaa
Man'ee hammanga kan akka barruuti akaakuuwwanii ykn moggaasa deetaaf gargaaru saagi ykn fili.
Akaakuu taattoo irratti hundaa`uudhaan, barruuleen siiqqee x irratti yookiin akka moggaasa deetaatti agarsiifamu.
Taattoo Masaka - Akaakuu Taattoo
Taattoo Masaka - Hangii Deetaa
Taattoo Masaka - Taattoo Maalimoota
Title is: Taattoo Masaka - Deetaa walfaannee